कुबेतको गर्मि ७५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो , जिवनस्तर नाजुक बन्दै । – Hamro24News
कुबेतको गर्मि ७५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो , जिवनस्तर नाजुक बन्दै ।
July 8, 2021 adminLeaveaComment on कुबेतको गर्मि ७५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो , जिवनस्तर नाजुक बन्दै ।
वैदेशिक रोजगारी लाखौं नेपालीको रहर नभइ बाध्यता बनिसकेको छ । स्वदेशमै रोजगारी नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवार पाल्ने सुन्दर सपना बोक्दै सयौं नेपाली एउटै गाउँबाट मलेसिया र खाडी राष्ट्रका विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन् । आम युवाको अरब सपनाभित्र परिवारको सुख, सन्तानको शिक्षादीक्षा र सुन्दर भविश्यको सपना पनि जोडिएको छ । यसको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो– दोलखाको माली ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएर फर्केकाको अनुभव मिश्रित छ । “परिवारमा गरिबी र सानोतिनो रोजगार पनि नपाएर सानै उमेरमा कुबेत गएँ तर बिरामी भएर एक बर्वामै फर्कनुपर्यो । अब फेरि दुःख भोग्न जान्न,” जिरी नगरपालिका वडा नं ३ (साविकको माली गाविस) की कल्पना बराइली भन्छिन् । आईएलओअन्तर्गत काममा स्वतन्त्रता परियोजना टिमसँगको अन्तरक्रियाको लागि बसेका केही महिलाहरूले विदेशमा गएका महिलाहरू हराएका छन्, खोजि गरिदिनुपर्यो भनी अनुरोध पनि गरे ।
जब दोलखामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको समन्वय र सहकार्यमा साविकको जिविस र पौरखी नेपालले सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो, तब गुमनामको अवस्थामा रहेका घरेलु कामदारको लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरू, पाएको दुःख र वेदनाको कहानी बाहिर देखिन थाले । सबै सरोकारवाला निकायहरूको चासोको विषय पनि हुन थाल्यो ।
साविकको ११ गाविस र २ नगरपालिकामा मात्र संचालित उक्त कार्यक्रमले केहि मात्रामा भए पनि जिल्लाभरी सचेतीकरण गरायो । दोलखा जिल्लाको उत्तर पूर्वी भागको जिरी नगरपालिकास्थित वडा नं. २ र ३ (साविकको माली गाविस) पर्या पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनको लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त गाउँबाट प्रायजसो सवै घरधुरीबाट कम्तिमा एक जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । उक्त गाउँमा शेर्पा जातिको बसोवास बाहुलियता छ ।
जिरीको ल्याण्डस्केपसंग मिल्दोजुल्दो र चेर्दुंगको रेन्जको माली माथिको डांडाको चौरमा चरिरहेका पशु पन्क्षिको दृश्य लोभलाग्दो छ । पशुपालन र आलु उत्पादनको अनुकुल स्थान भएको उक्त भूगोललाई यलुंग खोलाले दुइ भागमा बिभाजन गरेको छ ।
यस गाउँमा सानै उमेरमा अनमेल विवाह, आर्थिक अभावले श्रीमान श्रीमतीको झगडा र अरुको देखासेखी कारण प्रायजसो महिलाहरू वैदेशिक रोजगारको लागि खाडी मुलुकहरूमा गएका छन् । जिरी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष नोर्वु शेर्पाको अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकामध्ये लगभग ३० प्रतिशतको जीवनस्तर सुधार छ भने बाँकी ७० प्रतिशतको जीवनस्तर यथास्थितिमै रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी लाखौं नेपालीको रहर नभइ बाध्यता बनिसकेको छ । स्वदेशमै रोजगारी नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवार पाल्ने सुन्दर सपना बोक्दै सयौं नेपाली एउटै गाउँबाट मलेसिया र खाडी राष्ट्रका विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन् । आम युवाको अरब सपनाभित्र परिवारको सुख, सन्तानको शिक्षादीक्षा र सुन्दर भविश्यको सपना पनि जोडिएको छ । यसको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो– दोलखाको माली ।
Plz फोटो मा छोएर Get Well Soon लेख्नु होस म बा’च्न चाहान्छु म’लाई बचाइदिनुस् ,मुु’टु थामेर हेर्नुहोला क’ठै बि’चरा सके सहयोग गरौ नसके शे’र गरौ😢😭
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला
नेपालमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने जिल्ला कुन होला?
कति छिटो बिर्सिएका कोरोना, बसन्तपुर क्षेत्रमा देखियो यस्तो भीड?